Aluminum window igwe
Nkuku crimping igwe
Kwes ezumike aluminum profaịlụ nzukọ igwe
Arc ekwe igwe
Multi spindle mkpọpu ala igwe
Upvc window igwe
Nkuku ihicha igwe
Steel mkwado nweghi igwe
Egbochi ihe iko mmepụta akara
Ihe Anyị Dọhọ
n'elu n'ire ngwaahịa
Anyị na ngwaahịa na-bụ-eji maka n'ichepụta ihe aluminum na upvc windo na ibo ụzọ, egbochi ihe iko na ndị ọzọ na ubi metụtara aluminum na upvc profaịlụ, dị ka oyi ubi, green ụlọ, ákwà mgbochi mgbidi, ulo oru aluminum profaịlụ ọnwụ na-egwe ọka, na wdg
N'ihi na a mma nghọta nke ngwaahịa na ahịa, pleace click na nri button n'okpuru ozi, anyị ga-aza gị n'ime 24 awa.
Ịkwanyere window etiti V notch ọnwụ ikwo
Vetikal anọ cormers akpaka ịgbado ọkụ igwe
Jinan HAIJINNA CNC ígwè CO., LTD. na-agbalị ịbụ ndị ọkachamara na kasị mma mmebe na emeputa nke window na ụzọ Ndinam igwe ka Aluminium, UPVC window na ụzọ, ákwà mgbochi mgbidi na-egbochi ihe iko na-eme ka ngwá, ọkọnọ iche iche nke ihe ngwọta na-na-dị iche iche arịrịọ.
Tupu na ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-elekwasị anya nnyocha na mmepe nke niile na ngwaahịa, ọkọnọ ahaziri ọrụ, na-eme ka anyị na-traceable àgwà akara usoro na nke zuru okè mgbe-ire ọrụ. Na ihe karịrị afọ 10 'ahụmahụ, Hisena na-aghọ n'elu ika na-eduga emeputa ke China now.
Window igwe emeputa
Igwe eji agbado ọkụ na-enweghị isi Upvc , Portable Upvc Corner nhicha Machine , Glass gbazere bead Ịcha Hụrụ ,
Ngwa igwe zuru oke maka ime upvc ...
Kedu igwe achọrọ maka ịme alum ...
Dongzhao Industrial mpaghara, Puji obodo, zhangqiu, Jinan City, Shandong Province, CHINA.250200